UTesla ufuna abasebenzi eSpain, egxile ekusesheni eBarcelona naseMadrid | Izindaba zamagajethi
Kuyimfihlo evulekile ukuthi inkampani ka-Elon Musk inentshisekelo yokwandisa izitolo zayo eSpain futhi manje ngemuva kwe-tweet lapho uMusk uqobo waxwayisa ngezindaba zango-Okthoba 17 ukuthi akekho olindele, izindaba ziyaziwa ukuthi inkampani kagesi isivele ifuna eSpain kubasebenzi beBarcelona neMadrid. Lokhu kusho ukuthi ukuqala kwemisebenzi kaTesla kusondele futhi okwamanje sekukhona Kuwebhusayithi esemthethweni yenkampani, kunikezwa imisebenzi eminingi ukusebenza eBarcelona naseMadrid.
Isidingo sabasebenzi sibanzi maqondana namakhono afunwayo, kepha singabona izikhala zabasebenzi, onjiniyela abambalwa, indawo ephethe ezentuthuko namaphrojekthi, umphathi wokufakwa kwama-supercharger, uchwepheshe wezokukhangisa noma abaphathi bezentengiso abahlanu.
I-Tesla iyaqhubeka nokwanda kwayo emhlabeni jikelele futhi isivele ithengisa ngokusemthethweni izimoto zayo eBelgium, eDenmark, eJalimane, eFrance, e-United Kingdom, e-Italy, eLuxembourg, eNetherlands, eSweden naseFinland. Ngakolunye uhlangothi, eSpain namuhla ayinanto esemthethweni, kepha inkampani iyayisebenzela futhi lokhu kunikezwa kwemisebenzi kuyakufakazela lokho. Kumele kuqashelwe ukuthi ukunwetshwa kwama-supercharger eSpain kuyaqhubeka nenqubo yawo ngaphandle kokuthengiswa okusemthethweni kwezimoto zikagesi, kepha izimoto zidinga ukumakethwa ezweni futhi lokhu kubonakala kusondela.
Izimoto zakwaTesla ezisemakethe namuhla ziyiModel S enezihlalo ezi-5, iModel X enezitulo eziyi-7 futhi Imodeli 3 izotholakala maduzane, okulindeleke ukuthi kube yimodeli engabizi kakhulu ekhuluma ngokonga. Njengamanje uhla lwamanani luphakathi kwama-euro ayizinkulungwane ezingama-60 no-128, kuya ngezinketho iklayenti elizikhethayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Izaziso » UTesla ufuna abasebenzi eSpain, egxile ekufuneni eBarcelona naseMadrid
Imininingwane mayelana nokuvuza okusha kweNintendo NX